Faret Cretaceous: vertebrates, invertebrates, dinosaurs na ihe nākpu akpu | Netwọk Mgbasa Ozi
Oge nke Mesozoic nwere oge 3 ebe dinosaurs gbasaa ma laa n'iyi. Oge atọ a bụ: Triassic, Jurassic y Ugbala. N'ime oge ọ bụla enwere nnukwu mmepe nke fauna na dinosaurs, ọkachasị ndị Anụ Jurassic. Taa, anyị ga-ekwu maka mmepe na mgbatị nke faret Cretaceous.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu gbasara mmeba nke dinosaurs na Anụmanụ Cretaceous, nke a bụ post gị.
1 Anụmanụ Cretaceous
2 Mkpa nke dinosaurs na Cretaceous fauna
2.1 Ala dinosaurs
2.3 Dinosaurs na-eri anụ
2.4 Ihe nākpu akpu
2.5 Mmiri na-akpụ akpụ
N'ime afọ 79 niile nke oge a dịgidere na oge abụọ o nwere, ọ bụ ndị dinosaurs na-achịkwa anụmanụ ndị Cretaceous. N'oge ahụ e nwere ọtụtụ ụdị dinosaur mmiri na nke ụwa. Na mgbakwunye, ụfọdụ azụ na invertebrates gbasaa. Anụmanụ na oge a mejupụtara obere karịa mana malitere ịba ụba na oge na-esote.
Anyị ga-enyocha otu n'otu ụdị anụmanụ ndị mepụtara n'oge Cretaceous.
N'etiti ndị niile invertebrates na mepụtara, akpan akpan ke mmiri gburugburu ebe obibi, anyị nwere ike banyere mollusks. N’etiti ndị na-akpụ ihe, ammonoid ndị ahụ bụ cephalopods pụtara ìhè. Ndị ọzọ invertebrates bụ ebe nile bụ coleoids na nautiloids.
Phylum nke echinoderms nwere mmụba n'oge a. N'ime phylum a, anyị na-egosipụta ụfọdụ ụdị ndị bụ isi nke kpakpando, echinoids, na ophiuroids. Ihe omuma a nile ka anakọtara site na ntinye akwukwo ndi amara dika amber. Saịtị a nwere nnukwu ozi banyere arthropods. Enweela ike ịchọta ụdị ududo, dragonflies, bees, wasps, butterflies, ants, grasshoppers, na ndị ọzọ.
Vertebrates nwekwara nnukwu mmụba n'oge oge Cretaceous. Ndi kachasi ama n’etiti ndi otu a bu anu akpu aru. N'ime anụ ndị na-akpụ akpụ, dinosaurs pụtara iche na gburugburu ụwa yana gburugburu mmiri. Ddị dinosaurs a na anụ na-azụ mmiri na azụ.
N'ime usoro okike nke ala nke otu mammals bidoro jiri nwayọ nwayọ. Mgbasa ya malitere site n'ụfọdụ ụdị ndị sitere na mpaghara mmiri. Otu ihe ahụ mere ìgwè nnụnụ.
Mkpa nke dinosaurs na Cretaceous fauna
Dịka anyị kwurula na mbụ, dinosaurs bụ akụkụ dị mkpa nke anụmanụ ndị Cretaceous. Ma ọ bụ na n'oge a, dị ka oge ọlaedo nke dinosaurs, E mepụtara dinosaurs a na-ajụ ajụ ma nke na-eri anụ ya na nke mmiri. Anyị ga-enyocha nke ọ bụla n'ime ha.
Ọ bụ ìgwè dị iche iche n'oge a niile. E kere ha ụzọ abụọ buru ibu dabere na nri ha. N’otu aka, anyị nwere dinosa ndị na-eri anụ, na n’aka nke ọzọ, ahịhịa ndụ.
Ejiri aha ornithopods mara ha. Otu a nke dinosaurs nwere nri nke nwere naanị osisi. N'ime otu a, anyị hụrụ ụdị dị iche iche dịka:
AnkylosaursDinosaurs ndị a buru ibu ma mgbe ụfọdụ ruru ogologo nke mita 7 na elu nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 2. Ogologo ịdị arọ nke ụdị ndị a bụ tọn 4. Iji chebe onwe ya pụọ ​​n'aka ndị na-eri anụ ya, kpuchie ahụ ya ma ọ bụ efere nke na-arụ ọrụ dị ka nri. Enwetara ozi a niile site na ihe ochie nke achọtara na ọ ga-ekwe omume ịhụ na ndị nọ n'ihu dị mkpụmkpụ karịa ndị azụ. Isi ya yiri triangle, n'ihi na obosara ya karịrị ogologo ya.
Hadrosaurs: A na-akpọkwa dinosaurs a dị ka ọbọgwụ. Ha nwekwara nnukwu nha n’agbata ihe dị ka mita anọ na iri na ise n’ogologo. Ha nwere ike inwe onu ezé buru ibu ka ha nwee ike igweri ahihia nke oma. N’oge ụfọdụ, a chọtala okike ndị nwere eze nke ruru ezé 4 haziri n’ahịrị ma ha niile bụ ụdị molar. Odu a toro ogologo ma dikwa. Ebumnuche ọdụ a bụ ijigide nguzo mgbe ị na-aga ụkwụ abụọ iji gbaara ndị na-eri anụ ọsọ.
Pachycephalosaurs: Ha bụ dinosaurs buru ibu nke njirimara ha bụ ịnweta ọkpụkpụ ọkpụkpụ nke a na-eme ka ọ bụrụ okpu agha. Isi ọrụ ya bụ nke nchebe. Na ụfọdụ ụdị, ntopute ahụ nwere ike iru ọkpụrụkpụ nke ruru 25 centimeters. Ọ bụ ụdị dinosaur bipedal ma nwee ike iru ogologo ruo mita 5 na ịdị arọ nke tọn 2, ihe dị ka.
Ceratopsids: Nkeji dinosaurs ndị a bụ quadrupeds. Ha nwere mpi na ihu. Ha gbasakwara azụ nke isi isi ruo n'olu. Ha nwere elu nke ruru mita 8 wee rute onye mkpọrọ ruru 12 tọn.
Dinosaurs na-eri anụ
Ndị na-eri anụ gụnyere ìgwè ndị theropods. Ha dinosaurs na-eri anụ buru ibu ma na-anọchite anya ndị na-eri anụ. Otutu n’ime ha buru ibu ma jiri ukwu na aka siri ike. Ha na-agba agba abụọ na isi ihe ha nwere bụ na ha nwere ihu abụọ n’ihu na otu azụ.
N'ime otu dinosaurs ndị na-eri anụ ọ nwere ike ịbụ onye kacha mara amara Tyrannosaurus Rex.
Ihe nākpu akpu
N'ime anụ na-efe efe na-efe efe nke kacha mara amara bụ Pterosaurs. Ọ bụ ezie na ọtụtụ na-agụnye anụmanụ ndị a na otu dinosaurs, nke a abụghị ikpe. Anumanu ndi a bu uzo izizi nwere ike inweta ikike ife efe. Nha ya nwere ike iru mita iri na abụọ na nku nku ya.
Mmiri na-akpụ akpụ
Ìgwè ọzọ mepụtara ọtụtụ na Cretaceous fauna bụ anụ ndị na-agagharị mmiri. Ha na-adịkarị nnukwu n'etiti mita 12 na 17 n'ogologo. Ndị kacha mara amara bụ mosasaurs na elasmosaurids. Elasmosaurids nwere ụfọdụ njirimara njirimara nke ha pụtara maka inwe ogologo olu dị ka ha nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke vertebrae. Ha na-azụkarị azụ na azụ.
N'aka nke ọzọ, mosasaurs bụ anụ ndị ọzọ na-akpụ akpụ nke enyerela ndụ mmiri. Ha nwere ọdụ ogologo ma kwụ ọtọ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere anụmanụ nke Cretaceous.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Anụmanụ Cretaceous